IOS, watchOS, iPadOS, tvOS iyo macOS beta 4 nooc oo loo sii daayay horumariyeyaasha | Wararka IPhone
Apple ayaa hadda soo saartay noocyada kala duwan IOS, watchOS, iPadOS, tvOS iyo macOS beta ee loogu talagalay soosaarayaasha. Tani waa nooca afaraad ee beta-ka ee iOS 14.5, watchOS 7.4, iPadOS 14.5, tvOS 14.5, iyo macOS 11.3. Waxay umuuqataa in Apple ay dooneysay inay siideyso dhamaan noocyada hal mar markan sifiicanna ay uqabatay.
Noocyadan cusub ee horeyba loo heli karo, horumariyeyaashu waxay ku darayaan isbeddellada amniga iyo xasilloonida nidaamyada. Iyaga dhexdooda waxaan ka heli karnaa xoogaa horumar ah ama isbeddel muuqda oo xagga nabadgelyada ama xasiloonida ah laakiin in yar marka laga hadlayo shaqeynta nidaamka qalliinka.
Waa in la ogaadaa in noocyadan cusub ay tahay in si buuxda loo nadiifiyo waqtiga loo sii daayo dadweynaha guud sidaa darteedna Apple ay tahay inuu uga tago iyaga si buuxda u shaqeynaya. Ogsoonow in noocyadan iOS iyo watchOS waxay noqon lahaayeen kuwa aadka loo sugayo ee adeegsadayaasha aan haysan noocyada beta lagu rakibo, maaddaama ay ku darayaan taageero furashada iPhone-ka iyagoo adeegsanaya maaskaro ku saabsan. Tani waa wax ay isticmaaleyaal badani horeyba ugu riyaaqeen beddelkooda rakibidda betas dadweyne.
Maaddaama ay had iyo jeer muhiim tahay in la ogaado in noocyadan loogu talagalay soo-saareyaashu aysan kugula talin karin inay rakibaan isticmaaleyaasha intooda badan, waxaa laga yaabaa inay leeyihiin dhibaato kale oo ka sii dari doonta khibrada isticmaalka aaladahaan. Waxa aan ognahay waa in ilaa maanta aysan jirin wax dhibaato ah oo ku saabsan rakibiddooda iyo xitaa noocyada dadweynaha, laakiin wali waa betas waana jiraan in loo qaato khaladaadka suurtagalka ah ama isticmaalka bateriga oo sareeya haddii la rakibo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » IOS, watchOS, iPadOS, tvOS, iyo macOS beta 4 oo loo sii daayay horumariyeyaasha
Apple ugu dambeyntii wuxuu nuqul ka muujiyaa muuqaalka xiisaha leh ee Khariidadaha Google